सानालाई तपाईं कि तिमी ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कुरो एक वर्ष पहिलेको हो । मेरा एक अभिभावकले भन्नुभयो, ‘मिस मेरो छोराले घरमा आएका कुनै पाहुनालाई नमस्कार गर्दैन । बाबु नमस्कार भन भन्दा उल्टो किन नमस्कार गर्ने ? भनी प्रतिप्रश्न गर्छ । घरमा कोही पाहुना आएमा चिनेको नचिनेजस्तै गर्छ ।’ ती अभिभावकले छोरालाई सम्झाइदिन आग्रह गर्नुभयो । मसँग समाधानको सजिलो उपाय भने थिएन । मनमनै आँट गरेँ, कसो नसकुँला मनाउन । अभिभावकका गुनासो तथा आग्रहमध्ये यो पहिलो त थिएन, तरफरक भने पक्कै थियो ।
घरमा आफूले गराउन नसकेकाकुरा शिक्षकलाई भन्दा समाधान हुने ठान्नुहुन्छ, उहाँहरू ।संस्कार, चालचलन, रहनसहन रीतिरिवाज सिक्ने पहिलो स्कुल घर नै हो । मौलिक चालचलन, संस्कारभन्दा अरुको देखावटी नक्कल गर्नतिर हाम्रो ध्यान बढी जान्छ । हाम्रो संस्कारमा बाबुआमालाई मान्नुपर्ने आफूभन्दा ठूलालाई तपाईं, हजुर भन्ने, नमस्कार, ढोग प्रणामका कुरा एकादेशका कथा भइसकेको छ ।
आफूभन्दा साना तथा वृद्धवृद्धालाई माया, ममता, हेरविचार गर्ने जस्ता कुराहरूलाई सानै उमेरदेखि घरबाटै सिकाउनुपर्छ । यी कुराहरू सिक्न कुनै विद्यालय/कलेज गइराख्नु पर्दैन । हामीलाई यी सबै थाहा छ, तर व्यवहारमा लागू गरेका छैनौं । बाबा, आमा तथा आफूभन्दा ठूलालाई तपाईं/हजुर भनेर सम्बोधन गर्ने हाम्रो संस्कार हो । अहिले बालबालिकाले बाबाआमालाई तिमी भनेर सम्बोधनगर्न थालेका छन् ।
हामी घरमा छोराछोरीले पाएको वातावरण संस्कार हामीले बिर्सिंदै गएका छौं । स्कुलमा हामी बालबालिकालाई तपाईं/हजुर भन्न थालेका छौं । उता बाबाआमालाई छोराछोरीले तिमी भन्ने चलन भएका घरहरू पनि छन्, तिनमा छोराछारीलाई बाबाआमाले तपाईं/हजुर भनेर सम्बोधन गर्ने कुराअमिल्दो लाग्छ ।
यस्तो दुविधाबारे मैले बालबालिका सम्बन्धी लेख लेख्ने लेखक उषा पोख्रेलसँग कुरा गरेकी थिएँ । उनका अनुसार घर र विद्यालय मिलेर साना बालबालिकालाई गरिने सम्बोधनमा एकरूपता ल्याउनसके असल संस्कार दिन सजिलो हुन्छ । उहाँका अनुसार विद्यालयहरूले बालबालिकाहरूको लागि तपाईं/हजुर भन्ने चलन ल्याउनु राम्रो हो । तर यही चलन हाम्रो घरमापनि हुन जरुरी छ ।
यी संस्कृति र पर्वबारे हामीले बालबालिकालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । यस्तै अतिथि देवो भवको मर्म र भाव पनि छोराछोरीलाई बुझाउनसकेमा मेरो अभिभावकले चाहेको जस्तो छोराछोरीले पाहुनालाई आदर सत्कार गर्न सिक्लान्कि ! हामी अभिभावकहरू आफैंले नै नमस्कारको सट्टा विदेशी शैलीमा ‘हाई’ गर्ने वा हातमात्रै मिलाउने गरेका छौंभने छोराछोरीले पनि त्यस्तै सिक्लान् ।